15 Garoomada Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah ee Dufanka ah
Hilibka & Digaagga Cuntada Dareemka digaaga Suugaanta Maskaxda Dukaanka qadada ah ee Super Bowl
15 Rabshadaha Digaagga ee Dabiiciga ah oo la yaab leh oo lagu sifeeyo Soodhaha
Baalasha digaaga waxay u sameeyaan cunto fudud oo loogu talagalay xisbiyada maalinlaha ah ama qashinka, laakiin waxay kaloo sameeyaan saxan maalinle ah oo caadi ah. Cunnooyinkaas waxaa lagu diyaariyey mashiinka qafiifka ah ama si tartiib ah loo dubo foornada si fudud cunto. Haddii aad u diyaarsato digaag digaag ah, ku dar baradho ama baradho la dubay iyo saladh qudaar ah. Salad barafaysan iyo saladh broccoli waa xulashooyin aad u fiican ama u adeega noocyo kala duwan oo khudaar cayriin ah. Ulaha caleenta, qajaarka la jarjaray, iyo ulaha duurjoogta ah waa weyn oo leh baalalku. Ku dar suugo lakabada aad jeceshahay oo ku sii diyaari suugo badan!
Isku day mid ka mid ah cuntooyinkaan marka xigta ee qoyskaaga ka codsanayo baalal digaag. Oo ka dhig mid ka mid ah afarta ama afartan ee suugaanta ah inay u adeegaan iyaga.
01 ee 16
Honey Garlic Qashinka Digaaga
U diyaari baalasha digaaga ee dhadhanka leh oo leh khudrad dardar ah ama suugo macaan oo la iibsaday, ama karkariyo marinada oo u isticmaal inaad u darsato. Kuwani waa baalal weyn oo u adeega sidii cunto fudud ama u adeega qayb ka mid ah cuntada qoyska.
02 ka mid ah 16
Baayac Cajun-Style Digaaga Digaagga
Cajun-style dhir udgoon, toonta, liin, iyo dhadhan fudud oo dhadhan leh oo dhadhan leh. Baalashadu waa la mariyaa ilaa 4 saacadood sidaa daraadeed u qorshee. Suugo saafi ah oo la yiraahdo Louisiana ayaa ku weynaan doonta baalalkan.
Saucy Jack Daniel's Barbecue Barafka Dumarka Dumarka ah
Sawir: Diana Rattray
Tijaabin weyn oo la jeexjeexay oo la yiraahdo Jack Daniel's macmacaanka barbecue ayaa dhadhamiya dufankaas digaageysan ee la dubay. Suugo Sriracha waxay ku daraysaa kuleylka wanaagsan ee suugada, laakiin basbaas cayenan ah, dhoobo qoyan ama dambi kale oo kulul ayaa loo isticmaali karaa. Dhadee uun markaad ku dareyso heer kulka.
Sisin Digaaga Digaaga
Baalalkan dhadhanka ah waxaa lagu daboolaa maraqa jilicsan ee Asia-ka ka dibna waxaa la dubay si buuxda. Ku darso rusheyn oo ah miraha sisinta ama caleenta cagaaran ee cagaarka ah ee loogu talagalay cunto fudud ama saxan weyn.
Baalalkani waxay cuni doonaan raashin cajiib leh bariis kulul oo la kariyey ama baasto macaan oo Asian ah .
05 ka mid ah 16
Qodobada la dubay oo la dubay
Baalasha Buffalo ee la dubay waa ay ku raaxeeyeen buluug caleenta buluug ah ama isticmaal labiska lebiska buluuga ah ama labiska. Si aad u sameyso baalal kulul, ku dar sacas dheeraad ah maraqa, ama ku dar qaar ka mid ah basbaaska cayenne.
06 ka mid ah 16
Baastada digaaga la dubay oo la dubay
Baalasha cajiibka ah waxaa lagu ridayaa suugo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan, ka dibna waxaa la adeegsanayaa maro badan oo suunka ah ee dhinaca dhinac ah. Dhirta cawska ku jirta oo la yareeyey ama sambal waxay bixisaa kuleylka maraqa looska.
Drumettes digaag-iyo-baako digaag ah
Drumettes Hot iyo Spicy. Diana Rattray
Dalladaha dufan ee hindhis ah, dhuxul digaag ah ayaa ku habboon dhinacyada, daboolka, cuntooyinka, iyo cuntada qoyska. Rinjiga waxay ka dhigeysaa wax yar oo ka fudud marka loo eego qaababka qoto dheer ee la shiilay. Isku day in aad isticmaasho digaagga digaaga ee la jarjaray, ee ku jira maradaas.
08 ka mid ah 16
Cajun Digaagdaha Digaagga
Terri's baalasha digaag delicious waxaa la sameeyey badan oo Tabasco, basbaaska, iyo subagga. Waxay maraan mar markaa la dubay ilaa bunka dahabka ah. U samee baalalkan si aad ugu adeegtaan qashinka aad ugu jecel yihiin xaflad kasta ama ururinta.
09 ee 16
Khudradda Cagaaran ee Khudradda Dabiiciga ah
Sharoobada maple, toon, suugo soy ah, iyo dhirta teriyaki dhadhan kuwan baalasha digaaga delicious. Way fududahay in la diyaariyo oo la dubo oo aan u baahneyn diyaarinta hore. Haddii aad ku dhawaaqdid baalasha dhaadheer, dhajinta dhadhanka, waa mid aad u wanaagsan.
Qaybaha digaaga ah ee digaagsan
Baqashooyinkaas dhadhanka ah ayaa lagu sameeyaa maraqa soy, shariib, iyo dhirbaaxo. Baalashadu waxay ku maraan 3 saacadood ka hor inta aan la dubin.
Qodobada Dufanka Quruxda leh ee la barbardhigo
Baalasha digaaga fudud ee fudud ayaa lagu sameeyaa qashinka qashinka qashinka lagu dubo oo qoyan, taas oo ka dhigaysa cunto weyn ama cunto fudud qoys. Isku duub si bilaash ah ama saddex jeer ku dhaji cunto karis dabadheer si aad u hesho cunto macmiil ah ama cunto fudud maalin-kulan loogu talagalay dad badan.
Macmacaanka Dufanka Bariiska ah ee Dufanka ah
Brian Macdonald / Sawirro Sawirro / Getty Images
Baqashooyinkani waa mid la kariyey mashiinka qafiifka leh malab iyo suugo aad u jecel, oo ay weheliso Tabasco iyo xilliga kale. Cuntadani waxay ka kooban tahay qiyaastii 30, waxaana si fudud loogu labalaabayaa xisbi.
Linda's Slow-Cooker Kalluunka Digaagga
Sawirro Sawirro / Sawirro
Ginger, toon, suugo , iyo suugo soy ah ayaa ka sameysan suuggan baalasha fudfudud oo fudud. U diyaari baalasha digaaga ee caanaha ah leh ulaha khudradda iyo qadka aad u jeceshahay.
14 ka mid ah 16
Baayac Digaag ah oo la kariyey
Baalasha fudud ee fudud ayaa lagu dubay si kaamil ah sooska Buffalo-style. Ku dar faleemo cayriin ah oo dheeri ah maraqa kuleylka badan, oo u adeega dhirta cagaarka ah iyo qashinka buluuga buluuga ah ama labiska.
15 ka mid ah 16
Cabbiraadaha Dheecaan Teriyaki Digaagga Digaagga
Baalalkan digaag ah ee fudud ayaa la jarjaray ilaa ay kaadimaan, ka dibna waxay ku jiraan isku-dabiibada tariyaki macaan ee macmiilka qafiifka ah. Ku dar jajabka qaar ka mid ah suufka ama lakabka casaanka ah haddii aad rabto kuleyl.
Cuntada waxaa si sahlan loo kordhiyaa dadka intiisa badan. U samee xaflad xaflad ah ama munaasabadda qaboojinta.
16 ka mid ah 16
4 Raashinka Suugada Soodhaha ee Digaaga Digaaga
Tarjeetada Doodwanaagka : Suugaanta soodhada ah ee aasaasiga ah waxay ka dhigtaa mid dardar leh oo loogu talagalay bambooyin, ama u isticmaalka sida guntinta baalasha, kalluunka la shiilay, ama hilibka digaaga.
Chipotle Mayonnaise Recipe : Isticmaal majones shiidan tartiib tartiib ah sida dufanka loogu talagalay digaaga ama kalluunka ama sida sandwich ama burger faafa. Waa sahal iyo fududahay in la diyaariyo, oo leh shimbir yaryar oo chipotle ah ee soodhada adobo, majones, iyo waxyaabaha kale iyo maaddooyinka kale.
Creole Mayonnaise Khudradda : Maraqa Tani, oo la sameeyey majones, Cawska loo yaqaan 'Creole mustard', iyo xilliga Cajun, ayaa ka dhigaya mid weyn oo loogu talagalay baalasha digaaga ee Cajun.
Mustard-Mayo Dip Recipe : Tani fudud, dhadhan fiican leh waxaa la sameeyey majones, dillweed, iyo mustib.
Hilibka & Digaagga Cuntada
"Foorno-Dufan" Qoraal Qashin Dheer ah
Macmacaanka Pure-ka ee Beerka-Glute-Free
Digaag iyo bariis la dubey
Fudud oo fudud Easy Lemon Basil la kariyey Digaag
Tira de Asado: Argentinian-Style Cannabiska Lafaha
Casho Dheecaan Dambe Cillad ah
Koulakli Manti: Suugo Hilibka Qafiif ah leh Suugo Ciiro
Wiiseynida Salad Cunto + Biskuit Sandwich
Cannaanka Casaaniga ah ee Martini
Digaag Daraasad ah oo leh Puff Pastry Puff
Sida loo sameeyo Cream Catalan
Quudinta Cunto-huruudka Cuntada Amish
Recipe Pure Recipe Easy
Dhiiga Martini Daaqa
Qaboojiyaha Meelaha Jiilaalka
Kosher Hab Dhaqan Hilib (Hilib)
Qodobada Cabbitaanka Saliida Cabbitaanka
Chocolate-Chilled Cherry Marshmallows
Dufanka iyo Feta Salad